मोबाइलबाटै विद्यालयको निगरानी – News Portal
मोबाइलबाटै विद्यालयको निगरानी
May 12, 2018 epradeshLeaveaComment on मोबाइलबाटै विद्यालयको निगरानी
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा कमजोर भएको तथ्याङ्कहरु सार्वजनिक भइरहेका बेला सिकाइ उपलब्धि र गुणस्तर सुधार गर्न दाङको एक सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकले नै प्रत्यक्षरुपमा विद्यालयको निगरानी गर्ने प्रविधिको विकास गरेको छ ।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ मा रहेको माध्यमिक विद्यालय सेन्टर तुलसीपुरले विद्यालयको सम्पूर्ण अवस्थाको निगरानी अभिभावकले घरमै बसेर गर्ने गरेका छन् । आफ्ना छोराछोरीले कसरी कक्षामा पढिरहेका छन् ? विद्यालयको वातावरण के छ ? शिक्षकहरुको शिक्षण लगनशीलता कस्तो छ ? र विद्यालय प्रशासन कसरी सञ्चालन, ब्यवस्थापन भइरहेको छ ? भन्ने जस्ता सबै विषय अभिभावकले घरमै बसेर मोबाइलबाट हेर्ने ब्यवस्था मिलाइएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक भागवत पौडेलले बताए ।
‘विद्यालयका सबै कक्षा र कार्यालय क्षेत्रमा सिसी क्यामरा जडान गरी सिसी टिभी फुटेज हेर्ने एप्स अभिभावकलाई दिएका छौँ,’ प्रधानाध्यापक पौडेलले भने, ‘त्यहिबाट विद्यालयको सम्पूर्ण गतिविधि अभिभावकले विद्यालय नआएरै हेर्न सक्नुहुन्छ ।’ प्रधानाध्यापक पौडेलले विद्यालयले त्यस्तो प्रकृतिको एप्सको विकास गरेर अभिभावकले लाइभ अवस्था हेर्ने ब्यवस्था मिलाइएको बताए । उनले यसले अभिभावकलाई पनि विद्यालय र आफ्ना बच्चाबच्चीप्रतिको चासो बढ्ने गरेको बताए ।
अभिभावकहरु सधै विद्यालय आइरहने अवस्था छैन, विद्यालयको एप्सको प्रयोग भएमा जहाँ र जस्तो अवस्थामा भएपनि प्रत्यक्षरुपमा अभिभावकले विद्यालयप्रति चासो दिन सक्ने हुन्छ भन्ने उद्देश्यले अभिभावकलाई यो एप्स उपलब्ध गराई प्रयोगमा ल्याएका हौँ, उनले भने सहज रुपमा मोबाइलबाटै विद्यालयको यथार्थ अवस्था अभिभावकले देख्न सक्छन ।
कुनै समय विद्यार्थी नै नहुने र भएका विद्यार्थीको पनि सिकाइ उपलब्धि अत्यन्त कमजोर रहेको सेन्टर मावि पछिल्लो समय प्रविधिमा, गुणस्तर र सिकाइमा अब्बल बन्दै गएको छ । एक वर्ष अघिदेखि विद्यालय पूर्णरुपमा प्रविधिमैत्री बनाइएको पौडेलले जानकारी दिए । विद्यालय प्रविधियुक्त हुँदै गएको र प्रत्यक्षरुपमा आफूले नै यथार्थ अवस्था देख्न थालेको अभिभावकहरुले बताएका छन् ।
आफ्ना छोराछोरीले कसरी कक्षामा पढिरहेका छन् ? विद्यालयको वातावरण के छ ? शिक्षकहरुको शिक्षण लगनशीलता कस्तो छ ? र विद्यालय प्रशासन कसरी सञ्चालन, ब्यवस्थापन भइरहेको छ ? भन्ने जस्ता सबै विषय अभिभावकले घरमै बसेर मोबाइलबाट हेर्ने ब्यवस्था मिलाइएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक भागवत पौडेलले बताए ।
मोबाइलबाटै स्कुलको सबै चिज हेर्न पाइने रहेछ अभिभावक रोमकान्त भण्डारीले भने, छोराले कसरी बढिरहेको छ ? भन्ने देखिने पनि रहेछ । विद्यालयका आधा अभिभावक अहिले यो प्रविधिमा जोडिसकेका छन् । आधालाई जोड्ने तयारी भइरहेको विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लेखतराज पौडेलले बताए । उनले विद्यालयमा भर्न गर्न आउने अभिभावकलाई प्रविधिको बारेमा जानकारी दिएर एप्स दिने गरेको बताए । उनले मोवाइलबाट विद्यालयको निगरानी गर्न सकिने भएपछि अभिभावक विद्यालय नै आउनुपर्ने अवस्था हटेको र घरबाटै विद्यालय देख्न सकिने बताए ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक भागवत पौडेलले कक्षा ९ र १० मा अहिले प्राविधिक शिक्षाको अध्ययन विद्यालयले गराइरहेको जानकारी दिए । उनले विद्यालयलाई प्राविधिक शिक्षाको केन्द्र बनाउने योजना बोकेर अघि बढेको बताए । अहिले सेन्टर मावि विद्यार्थीको केन्द्र बन्दै जान थालेपछि प्रवेश परीक्षा लिएर मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
उनले विद्यालयका एक हजार दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना नगरिने योजना रहेको सुनाए । पछिल्लो समय जिल्लामा विद्यालयहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउन थालिएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा सिसी टिभी, इलाब्रेरी, इन्टरनेट लगायतका प्रविधिहरुलाई भित्र्याउन थालिएको छ । जिल्लाका केही अब्बल विद्यालयले प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दै लगेका छन् ।
नेपाल प्रहरीमा डिएसपी सरुवा कहाँ को गए ? सूचिसहित
February 24, 2021 Bhuwan Gautam